crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Haweeney 30 sano Indhool iska dhigaysay si aan loo salaamin! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka June 6, 2017	Comments Off on Haweeney 30 sano Indhool iska dhigaysay si aan loo salaamin! 212 Views
Madrid (Himilonews) – 28 sano kahor, Carmen Jiménez oo ku nool caasimadda Madrid ee dalka Spain ayaa gebi ahaanba noqotay indhoole dhaawac indhaha kasoo gaaray awgeed. Ugu yaraan, taasi waa waxa ay u sheegtay qof walba oo ay kamid yihiin reerkeeda – waayo waxay ku daashay dhihidda ‘helo’ qof kasta mana dooneyn inay dadka salaanto.
Hweeneydan 57-jirta ah ayaa dhawaan daaha ka rogtay inay awoodda aragga laheyd – waxna u dhugan kartay si fiican – taas oo qoyskeeda ku noqotay layaab ay sunniyaha la taagaan, in kasta oo aalaaba ay shaki ka qabi jireen sheegashadeeda.
Seygeeda ayaa u sheegay war-fidiyeenka in afadiisu ay si fiican ugu hor dhaashan jirtay billadayaha aqalka – mararka qaarna ay arki jireen iyada oo isku dayaysa inay deymada ku xado daawashada fogaan-aragga ay hor fadhiyaan.
Hayeeshe marna maysan qiran inay been ku tahay indhoolnimada ay sheegatay jeer iyo dhawaantan.
Balse maxaa qof muddo 30 sano in ku dhow ku qabsi kara inuu indhoole-nimo matalo? Carmen ayaa si ku tala-gal ah tani u sameysay si ay uga fogaato salaanta iyo la hadalka dadka aysan ka helin. “Waxaan ku daalay la kulanka dadka waddooyinka si aan u dhaho ‘hello’, marna ma ahayn qof bulshaawi ah. Inaan iska dhigo indhool, waxaan ku awooday inaan gudan waayo mas’uuliyad badan oo bulshada igala dhaxeysa,” ayay tiri marka loo eego Hay Noticia.
Marka laga yimaado sida ay qoyskeeda ugu sharraxday sababta ay muddo badan been ugu heysay, Carmen Jimenez waxa kale oo ay wajahaysaa dhibaato sharci ah, waayo isku diiwaan-gelinta sida indhoole, waxay ku heshay gargaar maaliyadeed oo gaar ah.
Warkeeda ayaa hadda ku baahay mareegaha Latin America iyo Yurub. Su’aalaha la iska weydiiyay sida qof ku matali karo muddo 30 sano ah indhoole-nimo ayaa ku horgudban dowladda inay ka fiirsato yabooha ay u fidineyso dadka aragga la’ iyada oo aan tijaabo caafimaad marsiinin.
Sheekada haweeneydan oo markii koobaad lagu daabacay Hay Noticia ayaan loo heynin caddaymo dhab ah. Haddiise ay rumowdo waxay noqon doontaa dhacdadii ugu waallida badneyd ee ina Aadan uu sameyso qarniga 21aad.
Previous: La kulan: Ninka 40 sano ku bixiyay nooleynta Keymaha la xaalufiyay!
Next: Eeyo cunay lamaanihii korsan jiray!
Adnan Menderes – Halyeygii Baraaruga Islaamiga ee Turkiga cusub!
Maalinta Caalamiga ee La-dagaalanka Nabaadguurka iyo Abaaraha.
Lakulan – Nin darba-jiifta ugu deeqa kabo ay xirtaan
Sababta Salax Banooni ay labadiisa goolal uga hor baxayaan Geedaha!
Mashruuc ila cun aniga oo dadka aan Muslimiinta ahayn lagu fahamsiinayo diinta Islaamka.